Vola Crypto - inona ary izany ary ahoana no fomba hamoronana ny volany manokana crypto? Ny hoavin'ny vola crypto
Olona maro no mandany ny ankamaroan'ny fotoany amin'ny tambajotra iray izay ahafahana mampitombo ny fifanakalozana ara-bola. Amin'ity tranga ity dia zava-dehibe ny mahafantatra ny vola crypto - inona moa izany, ny fomba ampiasàna azy tsara ary mitahiry izany. Ity karazana e-currency ity dia manana ny toetrany manokana, izay tokony ho raisina an-tsakany.
Inona no dikan'ny hoe crypto vola?
Ny vola virtoaly manokana, izay ananana vola madinika ho an'ny vondrona iray, dia antsoina hoe currency crypto. Satria ny tahirin-tahirin-tsarimihetsika fotsiny dia tsy azo atao. Maro no liana amin'izay ilaina amin'ny vola crypto, satria izy io dia natsangana ho toy ny fitaovana manerantany ho an'ny alàlan'ny tambazotra. Amin'izao fotoana izao, ampiasaina handoavana ny fampiasana ny angovo azo ampiasaina amin'ny solosainany hamokarana karajia matematik. Misy faritra maromaro an-tsena izay vonona hivarotra entana ho an'ny crypto-currency.
Ahoana no fiasan'ny milina crypto?
Ny vola elektronin'ity karazana ity dia tsy mifandraika amin'ny vola avy amin'ny vola nentim-paharazana. Ny isa dia voafaritra mafy, ka tsy matahotra ny vidim-piainana. Ny olon-drehetra dia afaka mamorona sy mampiasa ny vola manokana azy. Mba hividianana vola, misy fifanakalozana manokana ho an'ny fifanakalozana. Ny vola Crypto dia fotoana ahafahana mampihetsi-po avy hatrany tsy misy mpanelanelana. Ny vola madinika ao amin'ny rafitra dia ny code-ndreky kodiarana izay tsy manam-paharoa ary tsy azo ampiasaina indroa. Manana ny lalany manokana izy ireo, izay azo jerena amin'ny tranonkala manokana.
Ahoana no hamoronana kitapo ho an'ny vola crypto?
Tsy afaka mampiasa vola virtoaly ianao raha tsy manana kitapo manokana. Misy safidy maro sy toerana hitehirizana ny tahirinao ary ny tsara indrindra dia:
Ny loharanon-kevitra iombonana dia blockchain.infao. Ity kitapo ity dia manana teboka mazava, komisiona kely ary tsy misy fetra amin'ny fetran'ny vola alefa. Heverina ho mora ny mitahiry bitcoins ary manao asa kely.
Raha manontany tena ianao hoe aiza no mitahiry ny vola crypto, dia azonao atao ny mampiasa ny kitapo amin'ny exmo.me. Ity loharanon-kevitra fanampiny ity dia ny fifanakalozam-bola antsoina hoe crypto. Amin'ny fonosana toy izany dia azo atao ny mampiditra crypto-vola maromaro. Tsara ny manamarika komisiona ambany. Amin'ireo minisitra, ny mpampiasa dia manamarika ny fahaiza-manaon'ny fampiarahana amin'ny 0.01 VTS.
Baraingo malaza hafa dia cryptsy.com. Izy io dia miavaka amin'ny hafa fa afaka mitahiry manodidina ny 200 crypto-currency. Afaka mividy harena an-kibon'ny taninao ianao, noho ny vidin'ny fifanakalozana mahasoa. Azonao ampiasaina izany kitapo izany mba hitehirizana "vano".
Misy karazana virtoaly maromaro ary ny tena mahazatra dia ireto manaraka ireto:
Bitcoin . Ny vola voalohany voalohany natomboka tamin'ny 2009, ary mbola mitana toerana ambony izy. Ireo mpamorona dia nanome fehezan-dàlana malalaka, izay nahafahan'ireo programa hafa hamorona sy hampivelatra ny fonosana crypto hafa. Ny vola lany tamin'ny vola madinika dia lehibe ary ny olana dia voafetra ho 21 tapitrisa.
Litecoin . Ny famoahana ny vola crypto malaza, dia tsy afaka manadino ity dikan-teny miverimberina amin'ny vola voalohany ity ary ny vola madinika dia mora kokoa, ary 84 miliara ny fivoahana. Ny tombony hafa raha ampitahaina amin'ny Bitcoin dia ny lisitra mora kokoa sy ny fanoratana.
Peercoin . Ny famaritana ny vola crypto mety, dia mendrika ny manamarika fa ny dikan-teny fahatelo indrindra dia noforonina rehefa jerena ny code Bitcoin misokatra. Raha ampitahaina amin'ny vola virtoaly hafa, tsy misy fetra ny peercoin amin'ny isam-bolana nomanina, saingy misy ny fiakaran'ny vidim-piainana 1% isan-taona.
Inona no miankina amin'ny vidin'ny varotra crypto?
Ny vola virtoaly dia azo raisina ho toy izany raha tsy azo alaina amin'ny vokatra na ny serivisy. Ny tahan'ny vola crypto dia miankina amin'ny famatsiana sy ny fangatahana eo amin'ny tsena. Raha manaraka ny fifanakalozana vola elektronika ianao dia afaka mahita fiovana miovaova. Maro ireo vaovao vao liana no liana amin'ny hoe nahoana no mihamitombo ny hasarobidin'ny vola crypto, midika izany fa mihoatra lavitra noho ny fanomezana ny fangatahana. Misy karazany manokana izay ahafahanao mamantatra ny haavon'ny fahombiazan'ny vola madinika virtoaly: ny sanda ara-bola = vola madinika * vola madinika. Ny avo lenta kokoa, ny vola azo antoka kokoa.
Inona no omen'ny vola crypto?
Mba hahatonga ny vola elektronika voajanahary ho lasa mangataka, dia ilaina ny mikarakara ireto nuances manaraka ireto:
Mora ampiasaina, ary mihatra amin'ny kitapo, ny fifamoivoizana ary ny toy izany.
Ny fahafahana hifaneraserana amin'ny fitaovam-pandoavana efa misy, ohatra, ny mifatotra amin'ny karatra, kaonty ary viram-bola virtoaly.
Zava-dehibe ny fiarovana amin'ny fampiasana azo antoka ny kaontinao sy ny kitapo.
Ny currency Crypto dia tokony heken'ny mpivarotra vola ary malaza amin'ny mpampiasa.
Olona maro no liana amin'ny zavatra raisina amin'ny vola crypto, ary noho izany, tsy toy ny vola tena izy, ny tsy fahampian'ny vola amin'ny ankamaroan'ny virtoaly dia tsy voafehy amin'ny volamena, volavolan-dalàna, na soatoavina hafa. Ny fandaniana dia miankina tanteraka amin'ny fanomezana sy ny fangatahana. Mba hisorohana ny fiavonan'ny hafa dia nomena volamena - Hayek ny vola crypto.
Inona no mampidi-doza momba ny vola crypto?
Ny vola elektronika dia misy fahadisoana marobe izay zava-dehibe ny mahafantatra mialoha ny fampiasana azy ireny.
Tsy misy ny fanaraha-maso iraisam-pirenena. Tsy misy manam-pahefana manara-maso ny fanaraha-maso ny famotsorana sy ny hetsika ny Crypto-currency.
Ny fahatakarana ny lohahevitra - ny vola crypto, ny maha-izy azy ary ny zava-mampidi-doza, dia ilaina ny manamarika fa saika amin'ny rafitra rehetra dia voafetra ny famoahana. Mampidi-doza satria tsy misy mpikarakara varotra.
Tsy misy fomba handosirana ny karama. Zava-dehibe ny mandinika, mba tsy hianjady amin'ny mpitsikilo.
Manamarika ny fiantraikan'ny vola crypto eo amin'ny toekarena izahay, satria noho ny tsy fahampian'ny fitantanana ara-bola toy izany dia mety hisy ny toe-javatra raha toa ka tsy misy ifandraisany amin'ny tena fahamendrehan'ny toekarena sy ny mponina.
Noho ny tsy fahampian'ny famatsiam-bola virtoaly, mora ny manombantombana.
Noho ny tsy fahampian'ny fiarovana dia mety hitranga ny fianjeran'ny fianarana crypto. Misy ohatra ahitana olona an-tapitrisany no nangalatra noho ny fanafihan'ny hack, izay nitarika ho amin'ny fihenan'ny vidiny.
Ahoana no fomba hamoronana ny vola crypto manokana?
Misy torolàlana manokana momba ny famoronana ny volanao manokana crypto. Ilaina ny mampitandrina fa raha tsy misy fahalalana amin'ny fandaharana dia tsy misy zavatra mety hitranga.
Ao amin'ny github.com mila misafidy ny code mety indrindra ianao, mifototra amin'ny hoe hanorina ny tambajotra crypto.
Ny famoronana ny vola crypto dia midika ny fampiasana ny rindrambaiko mba hanitsiana ny fampiasana ny rindrambaiko. Izy rehetra dia miankina amin'ny fehezan-dalàna fototra sy ny rafitra miasa.
Ny dingana manaraka dia ny fanitsiana ny fehezan-dalàna efa misy. Ilaina ny fahalalana ny fandaharana. Ankoatra izany, aoka ho azo antoka fa tonga amin'ny anaran'ny vola crypto ianao. Ao amin'ny code de programme, ny anarana taloha ho an'ny anarana vaovao noforonina dia niova. Misy programa manokana izay manatanteraka haingana ny fanitsiana ilaina, ohatra, ny Windows, ny Fikarohana sy ny Fikarohana ary ny Fikarohana sy ny Fikarohana Tena dia mety.
Amin'ny sehatra manaraka, ny port ho an'ny seraserina dia natsangana ary misy efatra malalaka voafidy. Aorian'izany, dia fanitsiana mifanaraka amin'ny fehezanteny voafidy.
Amin'ny ambaratonga farany, mbola hanomboka ny dingana amin'ny famokarana io vola io any amin'ny blocs. Mbola mila mamaritra hoe firy ny vola madinika horaisin'ny mpitrandraka amin'ny famoronana sakana vaovao.
Loza Crypto - ahoana no hahazoana vola?
Mba hahazoana tombony amin'ny fampiasana vola virtoaly, afaka mampiasa teboka telo ianao. Matetika ny vola miditra amin'ny kryptomaly manatanteraka ny harena an-kibon'ny tany, izany dia misy ny famokarana vola ho an'ny fitaovana manokana sy ny algorithm-ny fitadiavam-bola. Tari-dàlana malaza hafa dia ny varotra, izay midika ny varotra sy fifanakalozana vola virtoaly amin'ny fifanakalozana manokana. Mba hahazoana tsaratsara kokoa - ny vola crypto, ny maha-izy azy ary ny fomba hanangonam-bola amin'izany, dia ilaina ny miresaka momba ny fampiasam-bola rehefa mividy ny vola virtoaly amin'ny vanim-potoan'ny fihenan'ny sivana.
Ahoana no ahazoana ny vola crypto?
Ny fitrandrahana ny famoronana kryptony vaovao mampiasa algorithm manokana dia antsoina hoe fitrandrahana. Tsy azo atao ny mijanona kely ao amin'ny solosaina an-trano amin'izao fotoana izao, satria ireo fitaovana ASIC manana fitaovana manokana momba ny fitrandrahana crypto dia niseho. Mahazo vola hafa ianao - Independêkôts (goaika) ary ny vahaolana malaza indrindra - Lightcane. Ny fitrandrahana ny crypto-currency dia tanterahana amin'ny fanaraha-maso ny fitsipika sasantsasany:
Ny haavon'ny fiotazana cryptonomete dia refesina amin'ny hash (h / s), noho izany dia mila mahafantatra ianao hoe ohatrinona ny halatra azon'ny ordinatera atao. Miankina amin'ny herin'ny karatra video. Ity mari-pamantarana ity dia azo jerena amin'ny tranonkala manokana.
Araka ny voalazan'ireo indices, dia voafidy ny crypto-currency. Ireo singa manan-danja dia ahitana: vola miditra vola / vola ary vola.
Manohy ny fijerena - crypto-currency, ny maha-izy azy sy ny fomba hanamboarana azy ireo, ilaina ny maneho ny ilàna ny fitadiavana dobo ahafahana mamokatra. Poole dia tranonkala iray mifandraika amin'ireo mpitrandraka madinidinika, noho izany dia mila mifidy loharanom-pitaterana avo lenta ianao ary misy ny kaonty efa misy.
Mbola hijanona hametraka ny fandaharan'asa momba ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, kitapo ary hidirana amin'ny varotra.
Ahoana ny fomba hivarotana ny vola crypto?
Ny mpikarakara dia manolotra ny olona liana amin'ny fomba be mpitia indrindra amin'ny varotra crypto. Azonao atao ny mividy / mivarotra ho an'ny rubles, dolara ary euros. Ny fampiasana ny vola crypto dia ampiasaina amin'ny teknolojia ECN, izany hoe ny lafiny faharoa amin'ny fifanakalozana dia tsy mpividy, fa mpivarotra hafa. Zava-dehibe ny hitadidy fa ny tombombarotra tsara dia miaraka amin'ny risika lehibe kokoa, noho izany dia tsara kokoa ny manomboka amin'ny fampiofanana amin'ny kaonty demo.
Investments amin'ny vola crypto
Maro ireo mpanankarena no mino fa ny vola virtoaly no fampiasam-bola tsara indrindra. Tsotra tsotra izao: mila mividy kitapo ianao, mividy ny vola crypto ary miandry ny taham-pivoarana hivoatra mba hivarotana. Raha te hampiasa vola amin'ny crypto ianao dia mila manara-maso ny taham-pahafahana ary amin'ny fotoana hividianana vina virtoaly amin'ny fifampitokisana azo itokisana. Tsara kokoa ny mividy crypto-vola amin'ny fampandrosoana na mitombina amin'ny bitcoin, rehefa latsaka ny vidiny.
Ny hoavin'ny Crypto-Currency
Ny fomba fijery ny vola virtoaly eo ambanin'ny fanontaniana lehibe ary noho izany misy antony maro:
Firenena samihafa no mitantana ny fonosana crypto amin'ny fomba samihafa. Any Thailand, Norvezy, Rosia, Shina ary Okraina, fandraràna ofisialy ny fampiasana ny vola virtoaly ho toy ny vondrona monetary. Amin'izao fotoana izao, any Etazonia sy ny Vondrona Eoropeana dia ampirisihina handoa vola amin'ny vola maimaim-poana, fa ny satany ara-dalàna dia tsy azo atao.
Ny fiheverana ny vidin'ny crypto dia voakapoka avo lenta, ka ao anatin'ny andro vitsivitsy dia mety hianjera izany, toy ny fitomboana be.
Ny vola virtoaly dia ampiasaina amin'ny piramida ara-bola.
Ahoana no hahazoana vola amin'ny Forex?
Famaritana ny asan'ny mpiasa
Ahoana ny fomba hampiaiky ny tafatafa?
Inona no atao antoka - ny tombontsoa sy ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny banky
Ahoana ny fomba hahatongavana ho mpanolo-tsaina ny Faberlic?
Mila fampianarana fanampiny ho an'ny vehivavy maoderina ve aho?
Biby ahitra - tsara sy ratsy
Fangatahana fampakaram-bady ho an'ny mamba
Ahoana ny fomba fikarakarana salady salady any an-trano?
Fampivelarana ny sariitatra nandritra ny 2 taona
Kisoa guinea - fikarakarana sy fikojakojana
Bôsina avy amin'ny fanosorana koba
Ahoana no hahatonga azy ho mendrika?
Ahoana ny fomba hanasa volon'ondry?
Ireo labozia Bifidumbacterin miaraka amin'ny tongotra
Ny mofomamy avy amin'ny atody henry
Air conditioning sy zazakely